Annaga nagu saabsan - SYNMEC International trading Ltd.
Ganacsiga tan iyo 2002, oo ku salaysan Huaixi warshadaha beerta, Shijiazhuang City, Shiinaha. Inta lagu jiro in ka badan 20 sano maareeyaan, waxaan noqon saaraha guul caalami ah oo loogu talagalay nadiifinta hadhuudhka & mishiinada warshadaynta abuur, iyo mid ka mid ah ugu weyn waa Shiinaha, ayaa 11 hektar dhul leh qalab processing horumarsan sida goynta laser, CNC lathe, iwm sanadka 2004, waxaan Bilaw ganacsi caalami ah, ka dib 5 sano waxaan si degdeg ah u horumarinay taas, markaa sanadka 2010 waxaan dhisnay hal nooc oo caalami ah oo nadiifin ah iyo mishiinada warshadaynta abuur, sidoo kale waxay maalgelisay shirkad madax-bannaan 'SYNMEC International trading Ltd.', si ay u bixiso ganacsi wanaagsan adeegga macaamiishayada dibadda. Ilaa hadda, waxaanu iibinay mishiinadayada in ka badan 160 wadan.
Hadhuudhka goosashada ka dib waxa uu ka koobnaan doonaa wasakh badan oo kala duwan, sida boodhka, cawska, dhagaxa, carrada, iwm. iniinuhu waxa laga yaabaa in ay caareeyaan, dhaawacmaan, xanuunsadaan, kuwaas oo laga yaabo in aanay soo bixin marka la beero. Digirtu waxay leedahay dhoobo dusha sare ah taasoo hoos u dhigaysa qiimaha suuqa. Waxaan haynaa tignoolajiyada iyo mishiinka si aan u dhisno iniin adag, hadhuudh caafimaad qaba iyo digir qurxoon.
Si loo dhiso mishiinka nadiifinta hadhuudhka goosashada ka dib ha si xor ah suuqa u aadaan, nadiifinta hore u sii nadiifinta ka saar abuurka tamarta lumay, kordhiyaan heerka biqilka, nadiifinta digirta waxay ka dhigtaa mid dhalaalaya waxay kordhisaa qiimaha suuqa. Waxaan nahay lataliyaha sare ee adduunka ee nadiifinta hadhuudhka & xalinta abuurka. Waxaan leenahay koox injineero xoog leh oo aqoon fiican leh, dhammaan injineerada waxay galaan dhowr jeer, yaqaanaan hadhuudhkaaga, ogaadaan wasakhdaada, sidoo kale kala duwanaanshaha badeecada, si aanu ku siin karno xal dheeraad ah si aad ula kulanto miisaaniyadaada
Ganacsi ayaa bilaabmay, warshaddiina waa la aasaasay.
Ruixue Grain Selecting Machinery Co., Ltd. waxay bilaabaan inay soo saaraan nadiifinta abuur iyo mishiinada farsamaynta.
Bilow ganacsiga caalamiga ah
Muddada koritaanka degdega ah ee suuqa dibadda.
Waxaan aasaasnay ​​SYNMEC International Trading Ltd. si ay u bixiso adeeg ganacsi oo caalami ah oo ka wanaagsan
Adeegga SYNMEC 76 waddan, ka caawi inay helaan abuur xooggan, hadhuudh caafimaad qaba, iyo digir qurxoon, si la mid ah waxaanu u cusboonaysiinnay heerka B ee shirkadda ganacsiga caalamiga ah ee Shiinaha.
Warshad cusub oo laga furay 11 hektar oo dhul ah.
Loo dhoofiyay in ka badan 100 waddan oo loo cusboonaysiiyay Heerka A.
In ka badan 160 waddan.